I-Lovely, Modern, I-Garden Apartment
Brooklyn, New York, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jana
U-Jana Ungumbungazi ovelele
Amakamelo okulala esimanjemanje futhi abanzi kanye nendawo yokulala yase-Brooklyn eyi-quintessential, enomnyango wangasese kanye negceke elingemuva lapho uzojabulela khona ukuphumula ngemuva kosuku olumatasa lokubuka indawo. Iphephile futhi ithulile nazo zonke izinsiza phakathi nohambo lwamaminithi ambalwa.
Njengoba isilungiswe ngokuphelele ngazo zonke izinsiza zesimanje, ifulethi lethu elisezingeni lengadi lisemgwaqweni olayini wesihlahla kwenye yezindawo zaseBrooklyn ezinomlando futhi ezinobungani bomndeni.
Ibhulokhi elilodwa kuphela elisuka ezindaweni zokudlela ezinhle nezitolo. Imizuzu eyi-10 yokuhamba ngaphansi komgwaqo oya edolobheni laseManhattan.
Ifulethi linendawo yokungena yangasese, ikhishi elihlome ngokuphelele, ipulani elivulekile lokuhlala / igumbi lokudlela, iwasha nendawo yokomisa. Igumbi lokulala linombhede olingana nendlovukazi futhi livula kuvulandi ongemuva obheke ingadi yethu, ogcwele isihlahla esikhulu somquba, izinyoni kanye nezingwejeje ukuze uhlale unobudlelwane. Umhume omncane ongaphandle kwekamelo lokulala ungahlalisa umbhede noma i-Air Bed.
Indawo enhle yokuphumula ngemva kosuku lokubonwa kwesayithi e-Manhattan noma ukuhlola izindawo ezimangalisayo ezihlukene zase-Brooklyn ezinezindawo zokudlela ezikleliswe kahle kakhulu, amagalari, izitolo zezincwadi ezizimele nezitolo zokudlela.
I-Quintessential brownstones linemigwaqo enqunywe esihlahleni, i-Carroll Gardens izenzele yona njengentandokazi yaseBrooklyn. Yize igcwele ama-hip bar, ama-boutiques, nezindawo zokudlela, ayikaze ilahlekelwe yi-mystique yayo yakudala ye-NYC. Igxile emndenini enezikole eziningi nezinkundla zokudlala eziseduze.
A mom, a small bussiness owner and an avid traveler. Lucky to be living in the greatest city in the world!
Abanikazi bahlala endaweni ephezulu.
UJana Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Brooklyn namaphethelo